Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment यिनै झुप्रोबाट सङ्घर्ष गरेका रवि भावुक हुँदै किन आए लाइवमा ? [भिडियो सहित] - Pnpkhabar.com भिडियो
यिनै झुप्रोबाट सङ्घर्ष गरेका रवि भावुक हुँदै किन आए लाइवमा ? [भिडियो सहित]
एउटा कलाकार राष्ट्रको गहना हुन्छ । जसले समाजलाई प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ, लुकेका आवाजहरुलाई सबन्धित निकाय सम्म पुराउने काम पनि गर्द्छ । आफ्नो भेष भुसा, कला सस्कृती लाई जगेर्ना गर्ने काम पनि गर्द्छ । सुदुर तथा मध्य पशिमका देउडाहरुलाई राष्ट्रिय मन्च सम्म पुराउन र सम्पूर्ण सुदुर तथा मध्यपश्चिम बासीहरुलाई एक जुट पार्ने काम रवि ओडले गर्दै आएका छन् । नेपाल आइडलको आगामी यात्रा सफल पार्न अधिक मात्रामा रबिलाइ भोट दिनु आबश्यक छ। उहाँको आइडल र साङ्गितिक यात्रा सफल पार्नको लागी तपाई हामी सबैले भोट गरेर सहयोग गर्न जरुरी छ।
हेर्नुहोस लाइवमा आएर के भने रविले :